FSD Africa Insurtech Accelerator Programme na-agbasawanye na West Africa
Ebe e si nweta: IT ego
Atumatu nke Financial Sector Deepening (FSD) Africa, nke United Kingdom na-akwado, na-ezube imepụta mmemme ngwa ngwa Insurtech na Ghana na Nigeria n'afọ na-abịa iji kwalite echiche ndị ga-eme ka ọchịchọ mkpuchi na mba abụọ ahụ na gafee.
Ọtụtụ ndị mmadụ n'Africa chọrọ iji ngwaahịa mkpuchi dị iche iche, mana ọnụ ahịa dị oke ọnụ metụtara na-egbochi ha.
N'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya na ntinye mkpuchi mkpuchi na mpaghara ahụ ka dị ala, yana ọnụ ahịa ndị a na-atụ anya maka onye ọ bụla n'otu n'otu dị ala ugboro 11 karịa nkezi ụwa, dịka otu ụlọ ọrụ kwuru. Nkwupụta McKinsey.
Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịgbanwe n'oge na-adịghị anya ka ụgwọ mkpirisi akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ngwaahịa a na-akwụ ụgwọ kwa afọ na-ebilite site n'enyemaka nke otu dị ka Ngalaba Na-ahụ Maka Ego Ego na UK (FSD) Africa na-akwado.
Ntọala a na-atụ anya na mmemme mmemme ngwa ngwa nke Insurtech na mba ọdịda anyanwụ Afrịka na-eso mpụta mmemme ndị dị otú ahụ na Kenya n'isi mmalite afọ a, yana mmekorita ya na gọọmentị obodo ahụ, ndị na-ahụ maka ịnshọransị, na onye na-ere ihe ngwọta igwe ojii Tellistic Technology Services.
Kelvin Massingham, onye isi ụlọ ọrụ FSD Africa na-ahụ maka ihe egwu, kwuputara na ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ na uto ngalaba inshọransị na ọ nwere obi ụtọ ịbụ akụkụ nke ịzụ ọgbọ na-esote ndị ọchụnta ego mkpuchi.
O kwukwara na FSD na-ezube ibido BimaLab Insurtech Accelerator Programme na Ghana na Nigeria, n'agbanyeghị na ụlọ ọrụ ịnshọransị akwụsịla n'azụ ngalaba ego ndị ọzọ n'ihe gbasara imepụta ihe ọhụrụ.
FSD Africa na-ezube ịnye ụlọ ọrụ Insurtech nke mmalite ego site na iji ego na onyinye, yana ikpo okwu dị n'ịntanetị ebe ndị ọchụnta ego nwere ike ịtụgharị uche, gbanwee echiche, wulite mmekọrịta, na nweta enyemaka teknụzụ sitere n'aka ndị ọkachamara ụlọ ọrụ dị iche iche.
Otu a na-arụkọ ọrụ na ndị na-ahụ maka inshọransị asatọ na kọntinent niile, gụnyere ndị dị na Ghana, Malawi, Nigeria, Rwanda, na Tanzania, iji mepụta ikuku na-agba ume ọhụrụ Insurtech.
Ọ bụ ngwa ịkparịta ụka n'Ịntanet na ntinye aka maka ndị na-achịkwa, dị ka Massingham si kwuo, lekwasịrị anya n'ịhazi maka mmepụta ihe ọhụrụ na ihe ndị dị ka Insurtech na mmalite gburugburu ebe obibi, kamakwa na nchegbu sara mbara dị ka gburugburu ebe obibi, mmekọrịta mmadụ na ibe na ọchịchị (ESG). FSD na-atụ anya inye aka n'imepụta mmemme yiri nke ahụ n'akụkụ ndị ọzọ nke mpaghara ahụ.
Ọchịchọ ọhụrụ a na-abịa mgbe ndị otu nke abụọ nke mmemme Kenya gụsịrị akwụkwọ na Fraịde gara aga. Enyere ndị sonyere nka nka na akụrụngwa iji mepụta na kwalite azịza ha n'oge usoro mmemme nke izu iri.
Ndị otu ahụ nwere mmalite iri na abụọ, ebe Karopay na Motisure na-anata ihe nrite maka nrụpụta ha.
Motisure na-enye mkpuchi ihe mberede nkeonwe ihe dị ka shilling Kenya iri (ihe dị ka cents 10) kwa ụbọchị nye ndị njem tagzi na ndị na-anya ụgbọ ala (boda-boda). Boda-bodas bụ ụgbọ njem ama ama na East Africa, ebe Kenya na-eje ozi nde iri abụọ na abụọ kwa ụbọchị.
Site na ego akwụ ụgwọ na-amalite na ihe na-erughị $1 kwa ọnwa, ngwaahịa mkpuchi edtech nke Karopay Bimashule na-ahụ na ụmụ akwụkwọ nọ na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ nke Kenya na-enweta mkpuchi mkpuchi ahụike yana ihe mberede onwe onye. Ọ gụnyekwara nkwenye ego ụlọ akwụkwọ n'ihe gbasara ọnwụ onye nlekọta.